PUBG Mobile မှာ Tier Protection က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ? | Codashop Blog MM
PUBG Mobile မှာ Tier Protection က ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်ပါသလဲ?
PUBG လို Battle Royale ဂိမ်းတွေက ဘာကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းသလဲ ဆိုရင်တော့ တိုက်ခိုက်စဥ်မှာ ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ Adrenaline Rush တွေ ဖြစ်စေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျည်ဆံတွေကို ရှောင်တာတို့ ၊ ပုန်းစရာ အကာအကွယ်များစီ ပြေးတာတို့ ၊ ခေါင်းကို တည့်တည့်ချိန်ပြီး ပစ်နိုင်တာတို့ရယ်နဲ့ အသက်ခံရတာတို့ကြောင့် စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေကောင်းတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်ထားတာထက် စောပြီး သေသွားရင်ကော။ မပူပါနှင့်၊ Tier Protection က ဒီလို အခြေအနေတွေကို ခံရသက်သာအောင် ကူညီပါလိမ့်မယ်။
Tier Protection ဆိုတာဘာလဲ?
PUBG Mobile မှ Tier Protection က ကစားသမားများ ရဲ့ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (Rating Points) ကို ထိန်းပေးလို့ Rank အမြင့်ဆုံး သို့တက်လှမ်းနိုင်စေရန် ကူညီပေးပါတယ်။ အကယ်၍ ဂိမ်းထဲမှာ စောစောသေသွားရင်ပေါ့။ ကစားသမားအားလုံးအတွက် အရေးကြီးသော သတိပေးချက်တစ်ခုကတော့ ကျပန်းကစားသမားများ နှင့် ကစားသည့်အခါမဟုတ်ဘဲ မိမိသူငယ်ချင်းများ (သင်၏အသင်းဖော်များ) နှင့် ကစားသောပွဲများတွင်သာ Tier Protection က အကြုံး၀င်မှာပါနော်။
Tier Protection ကိုသင်ဘယ်လို enable လုပ်ရမလဲ?
မိမိသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ကစားနေသည်ကို System ကတွေ့ရှိသည်နှင့် တပြိုင်နက် Tier Protection သည် အလိုအလျောက်ဖွင့်မှာပါ။ Tier Protection Event များ အကြုံး၀င်နေချိန်တွင် သင့် Rank ကို တွန်းတင်ရန် အကြံပြုပါတယ်။ ကစားသမားများကိုစုဆောင်းပါ (သို့မဟုတ်ဂိမ်းတွင်းမှ သူငယ်ချင်းများ) ကို ရွေးချယ်ပါ။ တစ်ကိုယ်တော်မစ်ရှင် သွားခြင်း နှင့် ယှဉ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ရမှတ်များ ဆုံးရှုံးမှုနည်းပါးနိုင်လို့ သင်အတွက်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။
Tier Protection ၏ အယူအဆကတော့ Tiers (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Crown, Ace, Conqueror) နှင့် မိမိ၏စွမ်းဆောင်ရည်များ (ဥပမာအားဖြင့် ပွဲတစ်ပွဲတွင် သင်ဘယ်နှကြိမ်သေဆုံးတာ သို့မဟုတ် သင်သတ်ခဲ့သည့် လူအရေအတွက် မည်မျှရှိသည်တို့) နှင့် သင့်အကောင့် ဘယ်နု Points ရရှိတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် အခြေခံ၍ ကစားနိုင်ပါတယ်။ သင်၏ နဂိုအဆင့် မှ အသစ်တစ်ခုသို့ ကူးပြောင်းရင် ကစားသမားများရရှိနိုင်သည့် အရာများမှာ –
Rank V ရဲ့ အဆင့် တစ်ခုစီအတွက် ကာကွယ်ပေးသော points (၃) ခု
Rank IV to I ရဲ့ အဆင့် တစ်ခုစီအတွက် ကာကွယ်ပေးသော points (၁) ခု
Ace နဲ့ Conqueror ရဲ့ အဆင့် တစ်ခုစီအတွက် ကာကွယ်ပေးသော points (၃) ခု
သင့်ရဲ့ သတ်နိုင်မှု နှင့် ရလဒ်နေရာချထားမှု ပေါ်မူပါတယ်။ ဒါပေမယ် သင်ဂိမ်းမှာ လုပ်နိုင်မှု အားနည်းခဲ့ ပြီး စောစောသေသွားခဲ့ရင်တော့ အမှတ်များကို နှတ်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ Tier Protection က အဆင့်နိမ့်ကို မကျရောက်မီ ကြားခံတားပေးတဲ့ သဘောပေါ့။ သင်၏ စုစုပေါင်း Rating ( Conqueror​​ ၊ ဒါမှမဟုတ် Ace ကနေ Conqueror ကို သွားတဲ့ အချိန်မှာ) မြှင့်နိုင်တာနဲ့ သင့် အနေဖြင့် Protction Points ကိုပြန်လည် ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ Rank တက်အောင်လုပ်တဲ့ အတွက် အားသာချက်တစ်ခုရတာပေါ့။
Codashop မှာဘဲ PUBG Mobile ကို ငွေဖြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့စီမှာ လွယ်ကူမြန်ဆန်စွာ ငွေဖြည့်နိုင်သလို Logins သို့မဟုတ် လျှို့၀ှက်နံပတ်များ ထည့်သွင်း စရာမလိုဘဲ ဖြည်စွက်နိုင်ပါတယ်။
Previous articleCodashop Global Series January 2021 စည်းကမ်းများ
Next articleWavePay နဲ့ Codashop မှာဝယ်ပြီးတော့ ပြန်အမ်းငွေရယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်နိုင်မည့်အချက်များ